“Waxaan iska diiday shaqada kooxda Chelsea” – Jorge Sampaoli – Gool FM
“Waxaan iska diiday shaqada kooxda Chelsea” – Jorge Sampaoli
Liibaan Fantastic January 24, 2017
(Sevilla) 24 Jan 2017 Tababaraha kooxda Sevilla ee Jorge Sampaoli ayaa daaha ka qaaday inuu iska diiday shaqada tababarenimo ee kooxda Chelsea.
Blues ayaa iska cayrisay tababare Jose Mourinho dhamaadka sanadkii 2015, waxayna baadi goob ugu jireen tababare si rasmi ah u hogaamin kara kooxda, Jorge Sampaoli ayaana ku jiray liiska tababareyaasha ay doonayeen ka hor intii aysan magacaabin Antonio Conte.
Jorge Sampaoli ayaa sheegay in Chelsea ay xiriir la soo samaysay balse uu ugu danbayntii doortay inuu layliyo kooxda Sevilla oo uu xiligaas katagay tababare Unai Emery oo u dhaqaaqay dhanka PSG.
“Waxaa jiray kooxo badan oo i danaynayay, laakiin waxaa ila soo xiriiray agaasimaha Sevilla, ani ahaan dooqaan ayaa aad ii soo jiitay” ayuu u sheegay Jorge Sampaoli idaacada Onda Cero.
“Sidoo kale Chelsea ayaan wadahadalo kula jirnay, Sevilla waa magaalo cajiib ah oo aad looga xiiseeyo kubadda cagta, marka aan ku jiro gudaha garoonka wax walbo waa kuwo soo jiidasho leh, heesaha iyo qaylada taageerayaasha”.
Maareeye Monchi oo muujiyay inuu midkood ku biirayo horyaallada dalalka Talyaaniga ama Faransiiska
RASMI: Laacibkii hore ee Man City Joleon Lescott oo ku biiray kooxda Sunderland